विश्वकपमा ब्राजिल र बेल्जियमलाई सबैभन्दा बढि ट्वीट, अरुले कति पाए ? – Everest Dainik – News from Nepal
विश्वकपमा ब्राजिल र बेल्जियमलाई सबैभन्दा बढि ट्वीट, अरुले कति पाए ?
काठमाडौं, साउन ३ । फिफा विश्वकप फुटबल २०१८ आइतबार सम्पन्न भयो । फ्रान्सले क्रोएशियालाई ४–२ गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि खेल सम्पन्न भएको हो। खेलमा फ्रान्सका लागि किलियन एम्बाप्पेले चौथो गोल गरे ।
प्रशंसकले एम्बाप्पेको गोललाई लिएर सबैभन्दा बढि ट्वीट गरेका छन् । ब्राजीलका नेमार आफ्नो उत्कृष्ट खेल कौशल हुँदाहुँदै पनि सानो निहँुमा मैदानमा बढी नौटंकी गरेको भन्दै विश्वकपमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे ।
ट्वीटरले मंगलवार भनेको छ क्वार्टर फाइनलमा बेल्जियमसँग पराजित भएको ब्राजिलको ट्वीटरमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको छ अर्थात् वा ट्वीट भएको छ । त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा फ्रान्स र अर्जेन्टिनाबीचको नकआउट चरणको खेललार्इ लिएर ट्वीट भएको छ। त्यसैगरी सबैभन्दा बढी ट्वीट फाइनल खेललाई लिएर भएका छन् ।
ब्राजिल र बेल्जियमबीचको क्वार्टर फाइनल खेलमा बढी ट्वीट भएको छ भने तेस्रो नम्बरमा ब्राजिल र मैक्सिकोबीचको प्री–क्वार्टर फाइनलमा बढि ट्वीट भएको छ । विश्वकपका जम्मा ६४ वटा खेलको दौरानमा ११५ अरब पटक ट्वीट भएका ट्वीटरले जनाएको छ ।
फ्रान्सका १९ वर्षीय एम्बाप्पे २१ औं संस्करणको विश्वकपमा चर्चित युवा खेलाडी बनेर उदाए । फ्रान्सका सञ्चारमाध्यमले उनलाई पेले र जिदानसँग जोडेर चर्चा गरे । उनले फ्रान्सका लागि त्यही गरे जो सन १९५८ को विश्वकप फाइनलमा ब्राजिलका लागि पेले र सन १९९८ को फाइनलमा फ्रान्सका लागि जिनेदी जिदानले गरेका थिए । यो विश्वकपमा एम्बाप्पे युवा खेलाडी भएको उपाधि हात पार्न सफल भएका छन् ।
ट्याग्स: बढि ट्वीट, ब्राजिल र बेल्जियम